Shukaansi qoraal ah: Baro shukaansi iyo qaabka loo soo jiito gabadha aad ka heshay
Jaceyl dhab ah: "Waan qalbi jabay, mana ku fakarin inaan helayo qof iyada la mid ah"
Shukaansi qoraal ah: Waxaa inta badan nala soo weydiiyaa.
Sidee loo shukaansadaa?
Erayo jaceyl ah keebaa loo adeegsadaa?
Gabdhaha hadiyad nuucee ah ayeey jecelyihiin?
Waa maxay erayaga shukaansi?
Dumarku maxay u jecelyihiin ninka isla weyn?
Gabadha aan jeclaaday nin kale ayeey iga raacday sabab?
Waxaad ka heshay gabar, qurux Ilaahey u dhameeyay, waxaad isku dayday in aad la hadasho balse weey kuu suuroobi weysay, Waxaad u qortay qoraalo mana aysan kaaga soo jawaabin, Waxba haka welwelin waxaan ku siineynaaa habka ugu wanaagsan ee loo shukaansado gabar walbaa. Shukaansi qoraal ah ama mid toos ah oo weji ka weji ah.
Marka hore aan isla fahanno waa maxay shukaansi? Sidee shukaansi qoraal ah u qori kartaaa? Gabadha aad rabto in aad jaceyl la wadaaagto, waa qof nuucee ah? Sidee ku kasban kartaa? Aan ku bilaawno Shukaansi iyo macnaha uu xambaarsan yahay.
Shukaansi waa Sheeko iyo isfahan ka dhex Dhacdaa laba qofood oo Lab iyo Dhidig ah, kaa oo ugu badnaan ujeedkiisu yahay in nolosha la wadaago ama leys guursado hadii labadaas qofood ay isku qancaan oo uu jaceyl uu dhex maro.
Waxaa jira shaqsiyaad aan shukaansi ama haasaawe dhex marin hadane nasiib u yeesha in ay lamaane ku noqdaan Safarka Dheer ee Noloasha.
Sidoo kale waxaa jiro lamaane jaceyl uu ka dhexeeyay oo mudo is soo shukaansanayay, kuwaas oo ugu danbeyn Calafku kala kaxeeyay.
Hadii aan usoo daadago Duluucda iyo ujeedka qormada waxaan kaga hadlaynaa Sida aad ku hanan karto qof aadan aqoon ulaheyn?
Aan ku horeyno Bilawga hadalka, marka aad dooneyso inaad Gabar la hadasho aqoon iyo garashona aysan idinka dhaxeyn waxaa fikir kaaga baahan hanashada iyo soo jiidashada dareenkeeda si, aad ujeedkaaga ugu dhaadhacdo. Hadaba raac talooyinkan soo socda:
Marka hore inta aadan qofka u gudbin si dhaqsi leh maskaxdaada uga dhaadhici:- Inaad Noqoto Qof Isku kalsoon.
Noqoto qof aan hadalka ka baqan. Hadalku ma ahan wax dhibaato keeni kara hadii aanu aflagaado, Micno darro ama meelka dhag ku aheyn shaqsiyada qofka, sidaa darteed isku day inaad gabadha dareenkeeda marka hore kusoo jiidato hadal ama ficil keeni kara inay istaagto hadii ay soctay, fariisin kara, hadii ay taagneyd hadii kale ugu yaraan sababi kara in ay dhageysato waxa damacaagu yahay.
Mar marka qaar waxaa dhacda in gabadhu ay kaa aamusto ama ay si yasmo leh kuu eegto haka quusan madaama ujeed aad leedahay. Markasta isku day inaadan caro iyo dareen badalan u muujin si aad dareenkeeda u badasho ama u hanato si farxad ku jirto oo ka badalan sidii ay ku bilaabatay.
Isku day inaad Adeegsato, hadalo Miisaaman, hadalku waxa uu leeyahay maqaam iyo micno gooni ah oo munaasabad ama ujeed ku yimaada, sidaa darteed haka weecan ujeedka aad leedahay iskuna day inaad miisaanto hadaladaada, ereyada aad adeegsaneysana yaysan noqon kuwo hagardaacin kara Damacaaga.
Ogow hadalba hadalka uu ka macaanyahay wuxuu kuu dhaweynayaa bartilmaameedkaagi.
Intaa Kadib waxaa kuu fududaaneysa in ujeedkaaga aad abaarto oo aad la hadasho gabadha indhahaagu calmadeen.
Hadaba maxaa xiga?
Dareenka Qofka waxaa lagu soo jiitaa ereyo dabacsan , Waji furan/ Dhoolacadeyn iyo inaad qadarin u muujiso.
Waxaa sidoo kale u baahan tahay ereyo Dabacsan, erayada qofka aad u adeegsaneyso ee ugu horeeya waa waxa Dareenka Qofka soo jiidan kara, Farxad galin kara, kuu suura galin kara inaad ujeedkaaga u sheegto.
Wallow qofkastaa uu Eebe u dhaliyay qaab uu u hadlo ama u adeegsado Ereyada oo uu dadka kale kaga duwanyahay ama aan iraahdo hal abuur u gooni ah ayna kala heli Marka xiga Salaan
Salaantu waa Furaha hadalka hadii aanay sheekada ama laqabsiga aysan ku imaan kaftan ka bilawda wax si isku mid ah ay u arkeen, caawimaad midkood midka kale uu u sameeyo, iyo waxyaabo kale oo la mid ah sidaa darteed marka hore qofka salaan, Adigoo adeegsanaya Salaanta Islaamka, iyo Salaamaha Kale ee Bariidinta iyo Dhaqanka.
Tusaale: Asalaamu Caleykum. Waan ku salaamay. Sidee tahay Walaashey. iyo kuwo kale oo la mid ah.
Gabadha u sheeg waxa ay tahay ama ugu yaraan wax qancin kara sida inaad muujiso quruxdeeda, Adaabteeda, socodkeeda ama Labiska ay wadato Hadii uu asturnaan yahay.
Maasha allah Aad ayaad u quruxbadantahay. Socodkaaga Ayaa aad isoo jiitay. Qof edeb leh ayaad tahay. Labiska aad wadato aad ayaad ugu nuureysaa. iyo wixii la mid ah.
Dadka qaar baa aaminsan in Wajifurnaanta iyo dhoolacadeynta ay isku mid yihiin iyagoo u sababeynaya in wajiga oo qofka loo fura ay tahay Dhoolacadeynta iyo qofka in loo muudsoodo.
Halka dadkalena ay ku tilmaamaan waji furnaanta-hadalka iyo deeqsiinta qofka hadalada uu rabo, sidaa dareed Gabadha si ay muuqaalkaaga ugu qanacdo u dhoola cadey, waxaa kuu fududaaneyso in halkaas sheeko qurux badan oo labadiinaba aad ku qanacdaan ay ka dhalato ama uu idin dhex maro shukaansi kii ugu macaan badan, qalbiyadiinana u riyaaqaan.
Gabadha oo aad qadarisaa waxay keeneysaa inay ku qadariso, marka qadarin u muuji xiliga aad la hadleysid, si xulasho iyo fursad ay dareenkeeda ku cabirto oo hadalka haka boobin, sababtoo ah waxaa laga yabaa in ay xishooneyso oo aysan hadalka dhinaceeda ka dhacsan karin.
Weydii Su’aalo ku saabsan aragtideeda, iyo inay fursad u heli karto inaad sii wada sheekeysataan inta aad xiriirka (Taleefon, Email ama Tilmaan xaafad) kala qaadaneysaan.
Kula hadal hadalo dabacsan sida:
Iga raali noqo. Mahadsanid. Sideed u aragtaa?
dhib miyaad u aragtaa inaan wada hadalno?
Kulankeena sideed u aragtaa? iyo kuwo la mid ah ama ka qurux badan oo munaasabad ama hadba xilli iman kara.
Hadii ay kuu muujiso dareen kaada lamid ah waxaad heshay qoftii aad la haasaawi lahayd ama nolosha dhadhankeeda la wadaagi lahayd.
Isku day in aad mar walbaa dareenkeeda fiiriso oo aad xaqiijisay hadalada iyada farxad gelin karo iyo midk aysan jecleyn. Dumarku dareenkooda ma qarin karaan, aad ayeeyna u qalbi furan yihiin.
Hadaba lasoco qeybta xigta.